Maxaa sababay dibadbaxyada gilgilay dalka Ciraaq? - BBC News Somali
Maxaa sababay dibadbaxyada gilgilay dalka Ciraaq?
Muuqaal muujinaya rabshado hareeyay caasimadda Baqdaad ee dalka Ciraaq.
Ugu yaraan shan qof ayaa ku dhimatay dibadbaxyo hor leh oo ka billowday magaalada Baqdaad ee caasimadda dalka Ciraaq.
Saddex ka mid ah dadkaasi ayaa dhintay ka dib markii maleeshiyaad hubeysan ay rasaas ku fureen dad dibadbaxyo ka dhigayay magaalada Naasiriya. Tiro kale oo dad ah oo ay ciidamo ka mid yihiin ayaa sidoo kale ku dhaawacmay rabshadahaasi ka dhacay guud ahaan dalkaasi.
Dibadbaxyo xooggan ayaa ka billowday guud ahaan dalkaasi, waxaana dadka dibadbaxyadani dhigaya ay socod ku tagayeen dhismooyin ay dowladda leedahay.
Tirada dadka ku dhintay rabshadaha Ciraaq oo sare u kacday
Qaramada Midoobey : Waa in la joojiyaa dadka sababta la'aanta loo laaynayo ee Ciraaq
Dadkani ayaa dalbanaya shaqo abuur, adeeg dadweyne oo tayo leh iyo in la soo afjaro musuqmaasuqa hareeyay dalkaasi.
Wararka ayaa sheegaya in dad dibadbaxyo dhigayay ay gubeen dhismo dowladeed oo ku yaalla magaalada Nasariya.
Dibadbaxyo noocan oo kale ah oo bishii la soo dhaafay gilgilay dalkaasi ayaa waxaa xoog ku muquuniyay laamaha amniga, waxaana rabshadahaasi ku dhintay ku dhawaad 150 qof.
Warbixin ay soo saartay dowladda dalkaasi ayaa lagu sheegay in laamaha ammaanka ay adeegsadeen awood xad dhaaf ah, si ay u damiyaan rabshadahaasi.
Ka hor inta aysan billaaban dibadbaxyadan, ayaa hoggaamiyaha ugu sarreeya wadaadada shiicada Ayatullah Cali Al-Sistani waxa uu ku baaqay in xaaladda la dejiyo.
Ra'iisalwasaare Caadil Cabdul Mahdi ayaa shalay oo khamiis ahayd sheegay in dadku ay xaq u leeyihiin in ay dibadbaxyo ku muujiyaan shucuurtooda balse marnaba rabshado aan loo dul qaadan doonin.
Muddo sanad ah ayaa laga joogaa markii ra'iisalwasaare Mahdi uu la wareegay xukunka dalkaasi. Waxa uu ballanqaaday in uu isku shaandheyn ku sameyn doono golahiisa wasiirrada isla markaana uu isbadal weyn la imaan doono, si loogu hoggaansamo dalabka dadweynaha balse dad badan ayaan wali ku qanacsanayn ballanqaadkaasi.
Boqolaal qof ayaa shalay gelinkii dambe isugu soo baxay fagaaraha Taxriir ee magaalada Baqdaad, waxaana intooda badan ay xalay oo dhan ku sugnaayeen halkaasi.
Dadka dibadbaxyada dhigaya ayaa saaka aad ugu soo dhawaaday aagga cagaaran ee ay deggan yihiin wasaaradaha dowladda iyo safaaradaha shisheeye. Haseyeeshee dad goobjoogeyaal ah ayaa sheegay in ciidamada ammaanka ay dadkaasi kala hortageen sunta dadka ka ilmeysiiso.
Dad dibadbaxyo dhigaya oo ay baacsadeen ciidamada ammaanka.
Cali Bayaati, oo ah xubin ka tirsan hay'adda xaquuqul insaanka dalkaasi Ciraaq ayaa sheegay in laba qof ay ku dhinteen rabshadihii ugu dambeeyay ee dalkaasi ka dhacay, halka qaar kale oo gaaraya ilaa 100 qof ay ku dhaawacmeen. Ilaa iyo haatan mas'uuliyiinta dalkaasi kama aysan hadlin arrintaasi.
Haseyeeshee sawirro laga soo qaaday goobtaasi ayaa muujinayay ugu yaraan hal qof oo u muuqday meyd oo yaalla waddada dhexdeeda.
"Annagu ma nihin dad baahan, balse waxaan u baahannahay sharaf," ayuu yiri mid ka mid ah dadkii dibadbaxyada dhigayay oo la hadlay wakaaladda wararka ee AFP.
Dibadbaxyo kale ayaa laga soo sheegayaa magaalooyinka Diwaaniyah, Najaaf iyo Naasiriyah oo dhammaantood ku yaal koonfurta dalkaasi. Booliska magaalada Naasiriyah ayaa sheegay in ugu yaraan 3,000 ay weerar ku qaadeen oo ay gubeen dhismo dowladeed oo ku yaalla magaaladaasi.
Dhanka kale, lix qof ayaa ku dhaawacmay magaalada Amara ka dib markii ilaalada xafiis ay leeyihiin maleeshiyaad Shiica ah ay rasaas ku fureen dad dibadbaxyo dhigayay, sida laga soo xigtay ilo ka agdhow laamaha ammaanka.
Weriyeyaasha ayaa sheegaya in xaaladdu ay ka sii dari doonto maanta gelinka dambe, waa haddii taageerayaasha wadaadka Shiicada ah ee Muqtadar Sadar ay waddooyinka isugu soo baxaan. Wadaadkan ayaa ah hoggaamiyaha mucaaradka ugu xooggan baarlamaanka dalkaasi.
Maxaa sababay dibadbaxyadani?
Dibadbaxyada ayaa ka bollowday magaalada Baqdaad 1-dii bishan Oktoobar, waxaana dadka ka qeybqaadanaya ay u badan yihiin dhallinyaro.
Ka dib markii ciidamada ammaanka ay rasaas u adeegsadeen in ay ku kala eryaan dadka dibadbaxyada dhigaya, ayaa waxaa ka sii daray rabshadaha, kuwaasi oo ku sii faafay dhawr magaalo oo hor leh.
Ra'iisalwasaare Caadil Cabdul Mahdi ayaa markii dambe guddi u saaray baaritaannada la xiriira dhibaatada dhacday.
Guddigaasi ayaa markii dambe sheegay in 149 qof oo rayid ah iyo siddeed ka mid ah laamaha ammaanka ay ku dhinteen rabshadihii dhacay lixdii maalmood ee ugu horreysay bishan Oktoobar. Inta badan dadkan ayaa ku dhintay magaalada Baqdaad.
Guddiga ayaa sheegay in "saraakiisha iyo taliska ciidamadu ay xakameyn waayeen ciidamadooda xilligii ay rabshadaha dhacayeen", arrintaa oo sida uu sheegay guddigani xaaladda uga sii dartay.
Sidoo kale guddigan ayaa sheegay in uu hayo caddeymo muujinaya in rag shiishyahanno ah ay ka hawlgalayeen guryo aan la gednayn oo ku yaal bartamaha magaalada Baqdaad.
Waxaana uu guddigan ku taliyay in xilka laga xayuubiyo tiro saraakiil ah oo ka tirsan laamaha ammaanka isla markaana ay tahay in la maxkamadeeyo. Saraakiishaasi waxaa ka mid ah taliyaha hawlgallada ee magaalada Baqdaad.